ဖောင်ကြီးကိုဗစ်ဆေးရုံမှာ သက်ကြီးရွယ်အို လူနာတွေ ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု - Zet Star
ဖောင်ကြီးကိုဗစ်ဆေးရုံမှာ သက်ကြီးရွယ်အို လူနာတွေ ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခု
ဒေါသတွေထွက်ပြီး ခံပြင်းမိလွန်းလို့ ကျွန်မသည်စာကိုရေးသာပါ တော်ယုံဆို ဘာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှတင်လေ့မရှိပါဘူး…
ကျွန်မအဖိုးက အသက် ၇၅ ရှိပြီ အသဲမကောင်းလို့ ဆေးရုံကိုပြနေရပါတယ် ပြနေရင်းနဲ့မှ positive ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် သိပြီးပြီချင်း နောက်နေ့ညမှပဲ ဖောင်ကြီးကို ပြောင်းဖို့ပြောတယ် ပြောင်းတာကဟုပ်ပြီ ကျွန်မအဖိုးကကိုယ်တိုင် အပေါ့အလေးမသွားနိုင်ဘူး ရေတောင် သူကိုယ်တိုင်မသောက်နိုင်တဲ့အခြေနေပါ အာ့ကြောင့်ကျွန်မတို့လူနာစောင့်တောင်းတယ် လူနာစောင့်ကလည်း လက်ရှိကျွန်မအဖိုးကိုစောင့်တဲ့ သူ့သမီးက စောင့်ဖို့ငိုယိုပြီးပြောတယ် စောင့်လို့မရဘူးတဲ့ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ ဟိုမှာသူတို့စောင့်ရှောက်ပေးမယ်တဲ့ (A29 ခွာညိုဆောင်က ဦးမောင်ညွန့်ပါ)
အစကတော့ ဒေါသထွက်ပေမဲ့ သြော် သူတောင် စောင့်ရှောက်မှာပဲလို့ ထင်ပြီး စိတ်ပြေခဲ့တယ် ဟိုရောက်တော့ ကျွန်မအဘိုးအခြေနေ သိပ်မကောင်းလို့ ရိုးရိုးအဆောင်ကနေ ICU အခန်းထဲရွေ့လိုက်ရတယ် နောက်တော့သက်သာတယ်ပြောပြီး ရိုးရိုးအခန်းကိုပြောင်းတယ်တဲ့ ကျွန်မတို့လည်း သက်သာတယ်ထင်ပြီး ဟီဟီဟားဟားနဲ့စကားတွေပြော ထမင်းတွေကောင်းကောင်းစားနဲ့ ကျွန်မအဘိုးဘယ်လိုနေနေရတယ် ဆိုတာမသိရဘူး
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲ ကျွန်မအဘိုးကိုစောင့်တဲ့ ကျွန်မရဲ့အဒေါ် positive ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် ကျွန်မအဒေါ်သူလည်း positive ဆိုတော့ ဖောင်ကြီးသူ့အဖေရှိတဲ့ နေရာကိုရွေ့ပေးဖို့တောင်ဆိုတယ် အာ့တော့ ဆရာတွေဆရာမတွေက လက်ခံတယ်တဲ့ အာ့ထိ ကျွန်မ ထိုင်ရှိခိုးမတတ် ကျေးဇူးတင်တယ် ပျော်လည်းအရမ်းပျော်တယ်….. ကျွန်မအဒေါ် သည်ည 11ကျော်လောက်မှာ ဖောင်ကြီးရောက်တယ် ဟိုလည်းရောက်ရောမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ရင်နဲ့တောင်မဆန့်ဘူး ခံစားရတယ်တဲ့
ကျွန်မအဘိုးအခန်းက အဲကွန်း အခန်းတဲ့ အေးစိမ့်နေတာပဲ ကျွန်မအဘိုးခန္ဓာကိုယ်မှ ဘာအဝတ်မှမရှိဘူး အသားတွေကအေးစိမ့်နေတာပဲ ခေါင်းအုံးက ခေါင်းအုံးနေရာမှ မရှိ စောင်ကစောင်နေရာမှာမရှိ တစ်ယောက်ထဲအခန်းထဲမှ ာပစ်ထား ကျွန်မအဒေါ်ဝင်သွားတော့ သူ့သမီးကိုတောင်မမှတ်မိပဲ ကုတင်အောက် မှာဝင်ပုန်းနေတယ် (အာ့မြင်ကွင်းမြင်မိတိုင်း ဒေါကတွေ တော်တော်ထွက် ရတယ် တစ်ဂယ်မခံစားနိုင်ဘူး) ခေါ်လို့တောင်မရဘူးတဲ့ စကားလည်းမပြောနိုင်ဘူး အခန်းထဲမှာဆိုတာရူပ်နေပြီ ထမင်းတွေကလည်းခုံပေါ်မှာသည်တိုင်း ဆေးကိုလည်းသည်တိုင်းပဲ ဆေးတောင်တိုတ်လားမတိုတ်လားဆိူ တာတော့ကျွန်မအဘိုးပြောမှပဲသိရမှာ
ပြောချင်တာက မလုပ်ပေး နိုင်ဘူး မနိုင်တော့ဘူးဆိုလည်း အိမ်ကလူတွေကို အကူညီလှမ်းတောင်းလို့ မရဘူးလား နောက်လူပါကူးမှာဆိုးလို့လား ကျွန်မတို့က လူငယ်တွေ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ် ကျွန်မအဘိုးကို ပြုစုလို့ကူးမယ်ဆိုရင် ကူးပျော်တယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး အိမ်နဲ့တစ်ချက် လှမ်းမတိုင်ပင်ပဲ သေလူတစ်ယောက်လိုသည်တိုင်း ပြစ်ထားလို့ရလား သိချင်တယ် ကျွန်မအဘိုးလို မျိုးပဲဘယ်နှယောက်ကို ရောပြစ်ထားပြီးပြီလည်း
ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်တွေ မလောက်တာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ မလောက်တာကို အပြည့်အဝနားလည်တယ် မလောက်ဘူးဆိုတိုင်း အခုလိုပစ်ထားလို့ရလား ကိုယ်မနိုင်ဘူးဆို လူနာစောင့်ခေါ်လို့ရ တယ်လေ ကျွန်မတို့က မလာဘူးပြောနေလို့လား သည်နေ့ကျွန်မ အဒေါ်သာရောက်မလာခဲ့ရင် ကျွန်မအဘိုးအဖြစ်ကို မတွေးရဲဘူး တစ်ဂယ်ကျွန်မအဘိုးကို သနားလို့သေတော့မယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြေးပြီးသွားလိုက်ချင်တယ် အခုကျွန်မအဒေါ်က ရေတိုက်မို့ပါးစပ်ဟ ခိုင်းတာ ပါးစပ်တောင်မဟနိုင်ဘူးတဲ့ ကျွန်မတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလဲ?
ဘာကြောင့်သည်လိုတွေလုပ်ရလည်းဆိုတာသိချင်တယ် ဟိုရောက်ရင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာရော ဘာလဲ? အသက်ကြီးလို့ဆိုတာနဲ့ပဲ သည်လိုမျိုးသေသွားရမှာလား? အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုရော သည်လိုပဲပစ်ထားကြတာလား? နားလည်တဲ့သူများရှင်းပြကြပါလား….. ထပ်ပြီးပြောချင်တာက ကူညီနိုင်မဲ့သူများရှိရင်ကူညီကြပါရှင် ကျွန်မအဘိုးကို ကျွန်မအဒေါ်တစ်ယောက်ထဲ စောင့်ဖို့ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး ဘာလို့ဆို သူကကိုယ်ခံအားကလည်း သိပ် မကောင်းဘူး အိပ်ရေးကလည်းပျက်ဆိုတော့ သူ့အတွက်ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး သူလဲကျသွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ
အာ့တော့သူ့အစားကျွန်မသာစောင့်လို့ရရင် စောင့်ချင်ပါတယ် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ရှိ Qဝင်နေရ တော့ဘ ာမှမလုပ်နိုင်ဘူး စစ်ထားတာ သုံးရက်လောက်တော့ရှိပြီ အခုထိအဖြေမသိရသေးဘူး အဖြေက Positive ပဲဖြစ်ဖြစ် Negative ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မအဖိုးဆီ သွားချင်တယ် ကျွန်မအဘိုးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ချင်လို့ပါ မသိလို့ထားလိုက်ရတာက အကြောင်းမရှိပေမဲ့ အခုသိသိကြီးနဲ့ ကျွန်မအဘိုးနဲ့အဒေါ်ကို သည်တိုင်းမထားနိုင်လို့ပါရှင် သိတဲ့သူများရှိရင်ကူညီကြပါနေ် A29 ခွာညိုဆောင်က ဦးမောင်ညွန့်ပါရှင် (Shwe Yamin Oo)
(ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ ဒီလိုအသံမျိုးတွေ ထွက်လာတာ အလွန်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်း နေ့ည မပြတ်လုပ်ကိုင်ပေးနေကြပေမယ့်လည်း လူနာအင်အားက ဝန်နဲ့ အား မမျှတာကြောင့် အခုလို စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာရတာပါပဲ။ နဂိုရောဂါပြင်းထန်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ များများနဲ့ မြန်မြန် လိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ဒီအဖြစ်အပျက်က သက်သေ ပြလိုက်တာပါပဲ။ ကိုဗစ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ နည်းဗျူဟာ ချမှတ်တဲ့သူတွေ သိစေမြင်စေ ကြားစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စာတည်း)
← ရန်ကုန်ကွမ်းယာဆိုင်များ မနက်ဖြန် ပိတ်ရမည် (မပိတ်ပါက ထောင် ၁ နှစ်ချနိုင်သည့် အမှုဖြင့် အရေးယူမည်)
ဟောင်ကောင်ဘဲကင်တွေကို လေယာဥ်စင်းလုံးနဲ့ သယ်လာပြီး ရန်ကုန်မှာ အခမဲ့ဝေခဲ့တဲ့ မန္တလေးသူအမျိုးသမီးကြီး →